२९ बैशाख २०७५
सिने वृत्तमा चर्चा छ निकिता पौडेलको । चर्चा कुन अर्थमा भने उनले केही दिनअघि मात्र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई भेटिन् । झाँको झारे मन्त्रीले । उनले हलमा ९० दिन मात्र नेपाली चलचित्र चलाउने र बाँकी दिन जुनकुनै सिनेमा चलाउन मिल्ने प्रस्ताव लिएर गएकी थिइन् । उनको प्रस्तावलाई नकार्दै मन्त्रीले ‘तपाईं कस्तो अध्यक्ष ? वर्षको ३६५ दिनमध्ये ९० दिन मात्रै नेपाली फिल्म चलाउने ? तपाईं नेपाली… विस्तृत समाचार
२१ बैशाख २०७५
सञ्चारमाध्यममा रक्सी, चुरोटको विज्ञापन पूर्णतः वर्जित छ । तर, प्रदीपकुमार उदयहरूलाई यस्ता कानुनले छुन सकेको छैन । उनी तीन वर्षदेखि रुस्लान नामक भोड्काका नाममा रुस्लान एफएम चलाउँदैछन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाललाई रिझाएर रक्सीको नाममा एफएम चलाउने इजाजत पाएका प्रदीप चलचित्र क्षेत्रमा चालबाज मानिन्छन् । हालै मात्र अर्काे चतु¥याइँ देखाएका छन् । अहिले चलचित्र संघ र चलचित्र निर्माता संघबीच जुहारी सुरु हुन थालेको छ ।… विस्तृत समाचार
​हँसाउनेहरू नै हत्तु
कुनै समय थियो हास्यटेलिशृंखलामा नेपाल टेलिभिजनको राज थियो । तीतो सत्य, मेरी बास्सै, जिरे खुसार्नीलगायत टेलिशृंखलाहरू त्यहीँबाट प्रसारण हुन्थे । तर, नेपाली हास्यकलाकारिता क्षेत्रमा जोडी फुट्ने रोग यसरी सल्कियो कि यही कारण जोडी तितर–वितर भए । कुनै समय खेम शर्मा–शिवहरि पौडेल, जितु नेपाल–दमन रूपाखेती, किरण केसी–राजाराम पौडेल आदिको जोडी जम्थ्यो । जो लामो समय टिक्न सकेन । पछिल्लो पटक केदार घिमिरे (माग्नेबूढो) र सीताराम कट्टेल… विस्तृत समाचार
​हन्टिङले यतातिर हान्दा
पाएसम्म मुर्गा खोज्ने, नभेटे आफैं चलचित्र निर्माण गरेर टाट बन्नेहरूको लस्कर बढ्दै जान थालेको छ । यस्तै टाट पल्टिएका फिल्मकर्मीहरूको भीडमा अर्काे एक नयाँ निर्माता भेटिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै ९० चलचित्र निर्माण भएकामध्ये दर्जन हाराहारीमा चलचित्रले मात्र नाफा कमाए । बाँकी चलचित्रले पानीसमेत पिउन पाएन । चलचित्रको भीडमा अर्काे चलचित्र पनि थपिएको छ नेप्टे । रोहित रुम्बाले निर्माण गरेको ‘नेप्टे’ मा अभिनेता… विस्तृत समाचार
​बसन्तको विदेश बास, बेग्लै उल्लास
२९ चैत्र २०७४
दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर प्रेमिल काव्य सिर्जनामा सक्रिय छन्, व्यापारिक पृष्ठभूमिका कवि÷गीतकार बसन्त चौधरी । यसचोटि फेरि अष्ट्रेलिया बस्ने नेपाली र हिन्दीभाषी समुदायमाझ गुञ्जिएका छन् । बसन्त कवितामा माया प्रेम मात्र खोज्दैनन्, देशप्रेमको न्यानो अंगालो पनि रोज्छन् । गीत अनि गजलमा उत्साह र उमंग मात्र होइन कि साहस र प्रेरणा थप्छन् । सिड्नीमा नेपालीमाझ उन्मुक्त गुञ्जिँदा दर्शकहरु रोमाञ्चित भएको क्षण अविष्मरणीय थियो । बसन्तले सुनाएका थिए, … विस्तृत समाचार
ढलेपछि ढकाल, सम्झनामै बेहाल
एमाले लुम्बिनीतिरका नेता–कार्यकर्ताले खाइलाग्दा नेता रामनाथ ढकालसम्बन्धी स्मृति ग्रन्थ’ त निकाले तर न मिति सही छ, न भाषासम्पादक । ग्रन्थका प्रमुख संरक्षक विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानसम्पादक खिमलाल भट्टराईलाई कहाँ फुर्सद हुनु यस्ता झिनामसिना कुरा हेर्न ? बिचरा पाठक दिमाग चाटिएर रुनु न हाँस्नु भइदिन्छ । उनको जन्म धेरैले २०१९ भन्दा झपेन्द्र जिसी २०१८ लेख्छन् । निधन माधवकुमार नेपालले चैत २०, अन्यले २२ र डा. प्रेमराज… विस्तृत समाचार
​चोरमाथि चकार, बल्ल गल्ती सकार
२३ चैत्र २०७४
अल्मोडा राणा उप्रेती, अर्थात् पुराना सांगीतिक रचना तोडमरोड गरी आफ्नो बनाउन माहिर संगीतकार । यिनैले हो, ‘नाइलनको सारीमा’ देखि ‘चिप्पक चिप्पक’, ‘फोन्टास्टिक...वन्डरफुल’, हुँदै पछिल्लो समय ‘कृ’ को ‘उकालीमा पछि पछि’ लाई आफ्नो रचनाका रुपमा पेश गरेको । गरे अल्मोडाले, तर मतियार बन्दा सजायँ भोगे चलचित्र निर्माता सुवाष गिरीले । सुवाष घानमा पर्नु, अल्मोडाहरु उम्किनुको रमाइलो प्रसंग अर्कै छ । चलचित्र विकास बोर्डका कारण सुवाष त्यो… विस्तृत समाचार
​कमरेडको भीडमा कोलाहल
विषय मामुली हो, स्वागत मन्तव्यको । तर, यही विषयलाई लिएर अहिले महाभारत मच्चिएको छ माओवादीनिकट जनसांस्कृतिक महासंघमा । प्रसंग हो, प्रतिरोध दिवसको । चैत ५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । माओवादी निकट आठ जनसंस्कृतिकर्मी रायन, जीवन शर्मा, विमल निभा, सीता आचार्य, सुभाष गजुरेलसहित राष्ट्रिय सम्मानबाट सम्मानित भए । जसै कार्यक्रम सकियो तर सरल सहयात्री र विमला केसीबीचको सम्बन्धलाई जोडेर पदाधिकारीले… विस्तृत समाचार
​कता राख्ने टुंगो छैन, कोशेलीको पीर
२५ फाल्गुन २०७४
‘काम गर्ने कालु, मकै खाने ढेडु’ भन्या यही हो । चलचित्र तथा हलहरूको सुुधारका लागि बक्स अफिस लागू गर्ने घोषणा झण्डै दशकअघि उठेको हो । फिल्मले कति कारोबार ग¥यो, कति हलमा रिलिज भयो, कुन हलमा कति शो र कति दर्शकले हेरेको छ भन्ने अभिलेख राख्न बक्स अफिस लागू गर्ने तयारी थियो १० वर्षदेखि नै ! झण्डै दशकदेखि विकास बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरवैताहरूको योजना हो यो… विस्तृत समाचार
चियाएर त हेर भित्र कति व्यथा छ
अरूलाई हँसाउने कलाकार दुःख र पीडाको अजंग पहाड बोकेर बाँचिरहेका हुँदा रहेछन् । यस्तै पीडा भोगिरहेका मनोज गजुरेल । कम्ता पीडामा छैनन् सुरेश थापा अर्थात् ‘दर्शने’ । मेरी बास्सै हुँदै युट्युबमा सर्वाधिक हेरिने टेलिशृंखला कमेडी गाइजमार्फत जमेका । रिल लाइफमा दर्शने र अनिता दंगाल अर्थात् मनमायाको जोडी खुबै जम्यो । श्रीमान्÷श्रीमतीको भूमिकामा । बढ्दो घनिष्टता देखेर आमदर्शकले उनीहरूलाई साँच्चैका श्रीमान्÷श्रीमती ठान्न थाले । कलाकारमध्येकै कसैले… विस्तृत समाचार